U-Ksenia Sobchak waqala wabonisa indodana yakhe esanda kuzalwa - Bonisa Ibhizinisi 2022
U-Ksenia Sobchak waqala wabonisa indodana yakhe esanda kuzalwa
Umyeni ka-Ksenia Sobchak ushicilele kuwebhu isibhamu sokuqala nendodana yakhe esanda kuzalwa, futhi waphika namahemuhemu ayekade esabalele emaphephandabeni.
Ubaba osanda kwenziwa uMaxim Vitorgan, umkakhe u-Ksenia Sobchak amzalela indodana ngoNovemba 18, wabelane ngevidiyo yokuqala nengane esanda kuzalwa ekhasini lakhe le-Instagram.
Kule vidiyo, umlingisi oneminyaka engu-42 ubudala ubonise umphakathi ukukhishwa kukaKsenia esibhedlela saseLapino, ngaleyo ndlela ephikisa imininingwane engamanga eyayisabalale kwabezindaba.
Ngempela, ngosuku olwedlule, amahemuhemu avela kuWebhu ukuthi uMaxim Vitorgan akazange ahlele ukukhishwa okungokomkhosi esibhedlela komkakhe nendodana yakhe encane. Futhi kuvidiyo ungabona imoto egcwele yamabhaluni.
Naphezu kweqiniso lokuthi umama osemusha ojabulayo onengane ezandleni zakhe wafakwa kuhlaka, ngeshwa, umfana akakabonakali. Kodwa-ke, ababhalisile bakaVitorgan baba nethuba lokuzwa ukusebenza okuthinta inhliziyo kwe-lullaby uMaxim ayiculela indodana yakhe.
Ngaphezu kwalokho, umyeni ka-Ksenia Sobchak ekuphawuleni kwevidiyo wenqabe amanye amahlebezi. Izintatheli zezinye zezingosi zaseRussia zibhale ngeSonto kusihlwa ukuthi lesi sihlabani esineminyaka engu-35 ubudala sase siphumile esibhedlela. Eqinisweni, u-Ksenia wayesekhaya nomntwana ngemva kosuku nje kushicilelwe ukwaziswa okungamanga.
Futhi ngaphansi kwevidiyo, uVitorgan ushiye iposi elikhulu lokubonga kubasebenzi basesibhedlela sokubeletha ngobuchwepheshe babo, nangenxa yokuthi akekho noyedwa wabasebenzi basemtholampilo, naphezu kwengcindezi kanye ne-paparazzi yonke indawo, akazange anikeze noma yiluphi ulwazi kumaphephandaba, noma ngisho nakakhulu isithombe.
- Iqiniso lokuthi akekho noyedwa wabasebenzi basemtholampilo, naphezu kwengcindezi ababhekene nayo kulezi zinsuku, naphezu kwezimoto ze-paparazzi ezisebenza eduze nomtholampilo, naphezu kwemizamo ephindaphindiwe yokungena ngaphansi kokucasha kwabantu / izilwane / izinto ezithuthukisiwe, ayizange isinike, ayizange ithengise futhi akukho lwazi oluputshuziwe, noma ngisho nangaphezulu isithombe - kwaba ukutholwa komuntu okuhle kimi. Bekubaluleke kakhulu kithina ukuvikela lesi sikhathi sempilo yethu ekubeni nelukuluku lokufuna ukwazi kanye nebhizinisi elakhelwe phezu kwalo. Sithintwa ukuhlanganyela kwakho, umthwalo wemfanelo kanye nobungcweti bakho. Ngiyabonga ngokusuka ekujuleni kwenhliziyo yami! Ningabantu bangempela! - wabhala uMaxim Vitorgan.
UNina Matvienko wavuma ukuthi wayekhohlisa indodakazi yakhe: U-Arsen Mirzoyan unecala
Ubudlelwano bukaTony Matvienko no-Arsen Mirzoyan baqala eminyakeni eyi-10 edlule. Uma umculi ezinikela emizweni, unina wenkanyezi uNina Matvienko wayeqondiswa ingqondo ebandayo. Umlingisikazi wayemelene nomshado wezithandani
UMasha Efrosinina wabonisa ukuthi manje sekuyimfashini ukugqoka futhi
UMasha Efrosinina ukhulume ekhasini lakhe le-Instagram mayelana nezitayela zemfashini. Abaningi bazowathanda
U-Natalka Karpa wabeletha ingane yakhe yokuqala: isithombe sokuqala somntwana
Umculi uNatalka Karpa wabeletha ingane yakhe yokuqala. Umyeni wenkanyezi u-Evgeny Terekhov utshele mayelana nayo yonke imininingwane yokubeletha ekhasini lakhe le-Instagram
Okuthunyelwe okuhle kuka-2021: Imithetho ebalulekile engu-6 yabasanda kuzalwa
I-Great Orthodox Lent 2021 iwukuzila ukudla okuqinile futhi okuyinhloko kumaKristu angama-Orthodox. Iyiphi indlela efanele yokuzila ukudla kulabo abanquma ukwenza lokhu okokuqala? Amathiphu angu-6 abalulekile kwabasanda kuzalwa